प्राविधिक गाइड |
ग्लास बोतल पानी भर्ने मेसिन
सानो पीईटी बोतल पानी भर्ने मेसिन
पेय भरने मेसिन
कार्बोनेटेड शीतल पेय भरने मेसिन
गैर कार्बोनेटेड पेय भरने मेसिन
रस तातो भरने लाइन
पीईटी बोतल रस भरिने मेसिन लाइन
बियर वाइन रक्सी भरने मेसिन
ग्लास बोतल बियर भरने मेसिन
गिलास बोतल रक्सी भरने मेसिन लाइन
तेल उड्ने मेसिन लाइन
आवश्यक तेल भर्न मेसिन लाइन
पानी उपचार र Pasteurizer
मह भर्न मेसिन लाइन
औषधि भर्न मेसिन
१० मिलीलीटर आई ड्रप तरल भरने मेसिन
सिरप भरिने मेसिन
गोली, कैप्सूल र ट्याब्लेट भरिने मेसिन
क्रीम ट्यूब भरने सील मेसिन
क्रीम बोतल भरने मेसिन
शैम्पू भरिने मेसिन लाइन
न N पोलिश भरिने मेसिन
रासायनिक भरने मेसिन
स्वचालित हात सेनिटाइजर भरिने मेसिन लाइन
स्वचालित रैखिक क्यापिंग मिसिन
स्वचालित टोपी लोडर मिसिन
गोल बोतल स्टिकर लेबलर घास श्रृंखला
शीर्ष साइड स्टिकर लेबल मिसिन ह्याप श्रृंखला
अगाडि र पछाडि साइड लेबलर HAS श्रृंखला छ
चिसो गोंद लेबलिंग मिसिन
तातो पिघल गोंद लेबलिंग मिसिन
आस्तीन लेबलिंग मेसिन हटना
पानीको थैली प्याकि Machine मेसिन
दूध/रस/अन्य तरल पाउच प्याकि Machine मिसिन
चटनी/पेस्ट झोला प्याकिंग मिसिन
पाउडर प्याकि Machine मेसिन
कफी बीन्स/नट/ग्रेन्युल पैकिंग मिसिन
चिया झोला प्याकि Machine मिसिन
रस स्याच भर्न क्यापि Machine मिसिन
तेर्सो प्याकि Machine मिसिन
तपाइँ तपाइँको नयाँ स्प्रे रंग कारखाना को लागी तयार गर्नु पर्छ?
धेरै ग्राहकहरु जो स्प्रे रंग उत्पादन उद्योग मा प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ उत्पादनहरु भन्दा पहिले के तयारी गर्नु पर्छ जान्न चाहन्छन्। निम्न लेख तपाइँ सामग्री, वातावरण र उपकरण को तीन पक्षहरु बाट विस्तार मा परिचय गराउनुहुनेछ। यदि तपाइँ एक नौसिखिया हुनुहुन्छ, यो लेखले तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्छ। ...
कोडिंग मेसिन के हो? तपाइँको भरण प्याकिंग लाइन मा प्रिन्टर थप्न को लागी तपाइँसँग कती विकल्पहरु छन्?
कोडर के हो? धेरै ग्राहकहरु स्टिकर लेबलिंग मिसिन को उद्धरण प्राप्त गरे पछि यो प्रश्न सोध्नुभयो। कोडर लेबल को लागी एक सरल प्रिन्टर हो। यो लेख उत्पादन लाइन मा धेरै मुख्यधारा प्रिन्टर को लागी तपाइँलाई परिचय गराउनेछ। १, कोडर/कोडि Machine मेसिन सरल कोडि machine मेसिन एक सह ...
के मेशिन को सेवा जीवन लाई प्रभावित गरीरहेको छ?
1. सबै भन्दा पहिले: मेशिन को गुणस्तर। बिभिन्न निर्माताहरु र बिभिन्न प्रकारका मेशिनहरु बिभिन्न ब्रान्ड र कन्फिगरेसनको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्न सक्दछन्। मेशिन धेरै संयन्त्रहरु बाट बनेको छ, र प्रत्येक संयन्त्र बिभिन्न सामानहरु संग जोडिएको छ। उच्च मा ...
बोलेको र निश्चित स्थिति
उहाँले रोलर बेल्ट प्रकार र गोल बोतल लेबलिंग को लागी निश्चित स्थिति प्रकार को बीच फरक धेरै जसो समय, खरीदारहरु बोली र निश्चित स्थिति उपकरण संग गोल बोतल लेबलिंग मिसिन द्वारा भ्रमित छन्। तिनीहरू गोल बोतल लेबल गर्न सक्छन्। तिनीहरू कुन फरक छन्? हामी कसरी एक उपयुक्त मेसिन छनौट गर्न सक्छौं? आउनुहोस् हामी इन्टर ...